पुरुषका नजरमा ठूला स्तन किन आकर्षक मानिन्छन् ? (जान्नुहोस्) - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
पुरुषका नजरमा ठूला स्तन किन आकर्षक मानिन्छन् ? (जान्नुहोस्)
एजेन्सी– महिलाको आकर्षण संग जोडिएका विभिन्न अंगहरु जस्तै अनुहारको बनोट, शरीरको बनावट, रुपरंग संगै उनीहरुको छातिमा रहेको बाहिरी अंग स्तनले पनि पूरुषलाई आकर्षित गर्ने गर्दछ । प्राय विदेशी समाजमा महिलामा रहेको स्तनको विकसित रुप अर्थात ठूला स्तनलाई आकर्षक मानिन्छन् ।
विस्तारै नेपाली समाजले पनि विदेशी नक्कल गरेको पाइन्छ । जसरी विदेशी समाजका पुरुषहरू ठूला स्तन र ठूलो हीप प्रति आकर्षित हुने गर्दछन् त्यसरी नै यहाँ पनि त्यसको सिको गर्न थालेको देखिन्छ । यसैले पनि होला महिलाको सौन्दर्य तथा आत्मसम्मान स्तन तथा हीप सँग जोडिएको संस्कृतिको विकास हुन थालेको ।
आफ्नो स्तनको आकारको विषयमा सबैभन्दा ठूलो चिन्ता वा चासो केवल आफ्नो यौन साथीलाई आकर्षिक गर्ने नै हो । तर यौनका विषयमा पूर्ण ज्ञान नभएका केहि व्यक्ति ठूलो स्तन भएकी महिलाले भोली बच्चा जन्मे पश्चात स्तनपान गराउँदा बढी मात्रामा दूध आउँछ र बच्चा स्वस्थ रहन्छ भन्ने भ्रममा समेद परेको देखिन्छ । तर दूधको मात्रामा सानो ठूलो स्तनको यो प्रकारको भूमिका हुँदैन भन्छन् चिकित्सकहरु ।
तर पनि संभोगमा स्तनको छुट्टै महत्व रहेको हुन्छ । स्तनको स्पर्शले पुरुषलाई यौन उत्तेजना दिन्छ भने महिलालाई पनि यौन आनन्द प्रदान गर्दछ । स्तनको सम्पूर्ण भाग यौन संबेदनशील भएता पनि यसको मुण्टो (एरोला) तथा त्यसको वरिपरिको भाग विशेष यौन संबेदनशील हुन्छ ।
यसको स्पर्शमा महिलाहरुले आनन्ददायी अनुभूति गर्दछन् । स्तनको मुण्टोलाई केहीबेर खेलाए पछि यो कडा तथा उत्तेजित हुन थाल्दछ । महिलालाई स्तनको आकार सानो वा ठूलो जे भए पनि यौन सुख तथा आनन्द पाउने कुरामा कुनै फरक पार्दैन ।
यसर्थ स्तन केहि सानो हुँदैमा संभोगमा कम आनन्द आउला भनेर चिन्ता लिनु आवश्यक छैन । कतिपयलाई बैबाहिक जीवनमा असर पर्छ कि भन्ने चिन्ता हुन्छ । यो त त्यो व्यक्तिले विवाह गर्ने व्यक्तिसंगको सम्बन्ध र उसको अपेक्षामा निर्भर रहन्छ ।
यहि समाजमा ठूला आकारका स्तन भएका कति महिलाका बैवाहिक जीवन सुमधुर नहुन सक्छन् भने कति साना स्तन भएका महिलाको सुमधुर सम्बन्ध रहेको हुन सक्छ । स्तनको आकार ठूलो वा सानो आफै मात्र यसको निर्णायक आधार होईन । यस सँग बाल्यकालमा उसले खाने गरेको पौष्टिक युक्त खानेकुरा तथा प्राकृतिक रुपमानै उसले लिएर आएको बंशाणुगत विशेषता पनि सानो ठूलोको विषयमा निर्भर रहन्छ ।
हामीलाई प्रकृतिले दिएका कतिपय कुरामा चित्त नबुझे पनि त्यसमा केही गर्न सकिने अवस्था नरहन सक्छ । यसर्थ आवश्यकता विहिन रुपमा पीर लिएर बस्नु कुनै बुद्धिमानी होईन । आफ्नो मन बलियो बनाई आफ्नो शारीरिक स्वरुपप्रति सजक भई आफूमा भएको अन्य प्रतिभा तथा व्यक्तित्व विकासमा जोड दिँदै अगाडि बढ्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी हो ।
केही ठूला देखिने स्तन प्रति पूरुषको आकर्षण बढ्नु भनेको क्षणिक तथा प्राप्ती नहुन्जेलको आकर्षण मात्र हो । अझ यसलाई भन्नुपर्दा देखावटी आकर्षण मात्र हो भन्दा पनि फरक पर्दैन । जुन क्षणिक हुन्छ । सानै स्तन भएका महिलाले पनि आवश्यक रोलप्लेको माध्यमबाट पुरुषलाई पूर्ण यौनमा सन्तुष्टि दिन सक्छन् । देख्दा र कल्पना गर्दाका बखदमात्र ठूलो स्तन प्रति पूरुष आकर्षित भएका हुने गर्दछन् । यसर्थ यौन सन्तुष्टि र यौन जीवनमा ठूलो या सानो स्तनको खासै भिन्नता पाइदैन ।